कति विकास भयो प्रमज्यू ? शीलान्यास गर्दैमा फुर्सद छैन – EKalopati
कति विकास भयो प्रमज्यू ? शीलान्यास गर्दैमा फुर्सद छैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मदन भण्डारी चुरे राजमार्गमा पर्ने ३१ वटा पुलको संयुक्त शिलान्यासको घोषणा गरे । हरेक दिन प्रमको काम शीलान्यास गर्ने भइरहेको छ । छापामा उनले शीलान्यास गरेका खबरहरु छ्यापछ्यापती छाएका छन् । अघिल्लोपटक प्रम ह्ँदा पनि ओलीले धेरै योजनाको शीलान्यास गरेका थिए । तर, प्रमले जति शीलान्यास गरे पनि काम भने कुनै पनि स्थानको पुरा भएको छैन । जनतालाई उनले शीलान्यासलाई विकास भनेर झुक्याई रहेका छन् । शीलान्यास गर्नु कुनै विकास होइन । एकै स्थानमा बसेर उनले ३१ पुलको शिलान्यास गर्नु लज्जाहीनताको नमुना हो । जनताले तीन वर्षको विकासको हिसाब मागे भने ओलीसँग कुनै देखाउन लायक चीज छैन । तसर्थ विकासको नाममा शीलान्यास कार्यक्रम जारी छ ।
देशको सबै बाटोको दुर्गती उस्तै छ । आकाशमा उडी शीलान्यास गर्दै हिँड्ने ओलीलाई के थाहा कि जनतालाई चाहिएको विकास कस्तो हो ? उनको दिनचर्या चलिरहेको छ बिहान उठ शीलान्यास गर्न हेलिकप्टरमा शयर गर वश । शीलान्यासमा हेलिकप्टरमा कुदेको पैसा जनताकै रगत र पसिनाको हो । ओलीले बजेटको एक तिहाई त शीलान्यास गरेर सिद्ध्याए हुनन् । आगामी दस वर्ष कुनै प्रमले कुनै पनि प्रजोक्टको शीलान्यास गर्नु आवश्यक छैन । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले शीलान्यास गरिसकेको आयोजनको समेत ओलीले दोहोर्याएर शीलान्यास गरेका छन् मानौं देशमा विकासको मूल फुटिरहेको छ ।
भोलि कुनै आयोजना समयमै कुनै प्रमले पूरा गरिदिए भने पनि ओलीले भन्नेछन् मैले नै शीलान्यास गरेको हो । यो जस लिने अहंकारको राजनीतिमा ओलीलाई कसैले जित्न सक्ने छैन । कामको नाममा माखो नमार्ने ओलीको शीलान्यास प्यार पनि अहंकारे राजनीतिको दाउपेचबाहेक केहि भएको छैन । कति विकास भयो प्रमज्यू ? भनी कसैले प्रश्न सोधेमा ओलीले भन्नेछन् शीलान्यास गर्देमा फुर्सद छैन
Queen Elizabeth urges public to get vaccinated against COVID-19
२३ गते संसद डाकिए नेपालसमूह पनि सत्तापक्षकै बेञ्चमा बस्नुपर्ने बाध्यता